Ny Semalt Shares 5 Karazana Plugin Essential Ny Site WordPress rehetra ilaina
WordPress no sehatra fitantanana malaza sy tsara indrindra ary manome vahaolana tsy manam-paharoa ho an'ny mpandidy sy ny manam-pahaizana. Mora ny mampiasa ary azo ampiasaina hanamboarana tranonkala fototra sy avo lenta. Na dia tsy mpikirakira tranonkala aza ianao dia afaka mampiasa WordPress mba hamoronana tranonkala matihanina. Manana lohahevitr'ireo lohahevitra sy plugins mifidy izy ireo, fa ny karazana plugin tena mahatalanjona sy tena ilaina dia voafaritra eto ambany avy amin'i Ryan Johnson avy amin'ny Semalt .
Ny fiarovana amin'ny bots ary ny hackers dia tokony ho laharam-pahamehana indrindra amin'ny webmaster amin'izao andro izao. Tokony hitazona zavatra hanohanana ny fanafihana mahazatra ianao. Soa ihany, misy plugins fototra sy avaozina mba hiantohana ny fiarovana anao amin'ny aterineto. Wordfence no iray amin'ireo plugins tsara sy tsara indrindra hatramin'izao. Manampy amin'ny fiarovana ny tranonkalanao izany ary misy amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy maimaim-poana. Ity plugin ity dia mikendry ny ho vahaolana ho an'ny fiarovana anao ary afaka manakana mora foana ny fanafihana mahery fihetsika ataon'ny herisetra sy ny fanandraman'ny fidirana amin'ny firenena.
Plugins backup data:
Ny ankamaroan'ireo orinasa mpikarakara fampiantranoana dia manohana ny mpanjifany, saingy tsy afaka miantehitra aminy isika noho ny olana manokan'ny fiainana. Raha tsy te ho lasa toerana mety hamoahanao ny rakitrao ianao dia tokony hametraka Plugin backup amin'ny WordPress haingana araka izay tratra..Ny plugin Buddy izay be mpampiasa indrindra dia azonao atao. Asa mahatalanjona mahavariana izany izay ahafahanao manamboatra ny famandrihana isan-kerinandro, isan'andro sy isam-bolana. Izy io dia manana fahafahana mamonjy ny rakitrao an-tserasera sy ivelan'ny aterineto, ary ny tombontsoa lehibe amin'ity plugin ity dia ny hoe ny sandan'ny fanontam-pirintany dia $ 70 fotsiny. Izany dia ahafahanao manangona rakitra hatramin'ny 1GB. Ary raha te hanana plugin maimaim-poana ianao dia afaka manandrana ny BackWPup.
Plugins fanatsarana tranonkala:
Raha te hanintona olona maro ao amin'ny tranonkalanao ianao ary te-hanatsara kokoa ny valin'ny fikarohana, dia tsy maintsy manandrana plugins optimisma amin'ny WordPress ianao. SEO na fanatsarana ny motera fikarohana dia manan-danja mba hisintonana ny olona ao amin'ny tranonkalanao, ary afaka mampiasa plugins hafa ianao mba hahazoana ireo zavatra vita. WordPress SEO avy amin'i Yoast no plugin indrindra sy tsara indrindra. Vahaolana tanteraka ho an'ny olana rehetra mifandraika amin'ny SEO izany. Manampy anao hampiditra ny lohatenin'ny SEO, ny famaritana, ny teny sy ny teny ary ny meta ao amin'ny tranonkala mora ary mamonjy fotoana maro.
Plugins social media:
Ireo tranonkalan'ny tambajotra sosialy dia nanova ny fomba fizarana lahatsoratra amin'ny aterineto ary lasa ampahany manan-danja amin'ny tranonkala manerantany. Ho an'ny ankamaroan'ny tranonkala, mora ny mitondra fiara amin'ny media sosialy, ary afaka manararaotra ireo plugins an'ny tambajotra sosialy ianao. Ny Kitendry amin'ny AddToAny dia plugin iray feno sy be mpampiasa. Azo ampiasaina izy io ary ahafahanao mizara votoaty ao amin'ny tranonkala media sosialy mora foana. Azonao atao ihany koa ny manandrama mora sosialy amin'ny WordPress izay manana safidy sy karazany am-polony amina fanampiana.
Raha te-hanara-maso ny kalitao amin'ny fifamoivoizan'ny tranonkala ianao dia aleonao mampiasa ny Google Analytics. Na izany aza, raha te hahalala marina sy haingana dia haingana ianao, tokony mametraka Plugin WordPress farafaharatsiny. Google Analytics dia vahaolana tsara indrindra amin'ny aterineto. Afaka maimaim-poana sy haingana ny fifandraisana amin'ny site WordPress. Azonao atao ny manara-maso ny rohy rehetra, mijery ny fahitana amin'ny fotoana rehetra ary manao tetik'ady A / B amin'ny alalan'ity fandaharana ity Source .